Dagaal Khasaare geystay oo ka dhacay Gobolka Sool & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Dagaal Khasaare geystay oo ka dhacay Gobolka Sool & Wararkii ugu dambeeyay
Dagaal Khasaare geystay oo ka dhacay Gobolka Sool & Wararkii ugu dambeeyay
Sool (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya gobolka Sool ayaa sheegaya, in dagaal khasaaro kala duwan geystay uu ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolkaasi, kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada Somaliland iyo kuwa la magac baxay dib u xorreynta SSC.
Dad goobjoogayaal ah ayaa ku soo warramaya in dagaalkaasi uu ka dambeeyay, kaddib markii ciidamada Jabhadda la baxday dib u xorreynta SSC oo uu hoggaamiyo Col. Faysal Falaalug ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Somaliland ay ku lahaayeen halka lagu magacaabo Xagarrey oo ka tirsan deegaanka Tukaraq.
Wararka ayaa intaasi ku daraya, in uu jiro khasaaro labada dhinac kasoo gaaray dagaalka, balse dadka deegaanka qaarkood ay Warbaahinta u sheegeen in weli si rasmi ah u helin khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Jabhadda la magac baxday dib u xoraynta SSC ee uu hoggaamiyo Col. Faysal Falaalug ayaa dhowr jeer oo hore weerarro gaadmo ah, waxaa ay ku qaadeen saldhigyada Ciidamada Somaliland.
Somaliland weli kama aysan hadlin dagaalka ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
Dagaal ka dhacay gobolka Sool